Nayakhabar.com: ‘सर्वहारा’ माओवादी नेताले कहाँबाट कमाए करोडौंको सम्पत्ति ?
‘सर्वहारा’ माओवादी नेताले कहाँबाट कमाए करोडौंको सम्पत्ति ?
माओवादीका केन्द्रीय नेताहरुले आफ्नो सम्पूर्ण पैत्रिक सम्पति र जायजेथा पार्टीलाई बुझाएर सर्वहारा बनेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । ती नेताहरुले व्यक्तिगत र निजी सम्पत्ति त्यागेको बताउँदै आएका छन् ।
तर, उनीहरुको यस्तो कार्य एउटा नाटकमात्रै रहेछ भन्ने अहिले केही मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले स्पष्ट पारेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी एमाओवादीका सचिव हुन् । उनले जनयुद्धकालमा आफ्नो सम्पत्ति पार्टीकरण गरेका थिए ।
टोपबहादुरले जनयुद्धकालमा पार्टीलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा १० लाख मूल्य बराबरको घर घडेरीबाहेक अन्य जग्गा नभएको उल्लेख गरेका थिए । तर, मन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा भने उनले ७३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखाएका छन् ।
त्यस्तै पार्टीलाई सम्पत्ति बुझाउँदा रायमाझीले नगद छैन भनेका थिए । लजिस्टिक सामान र सुनचाँदी पनि छैन भनेका थिए । अहिले चाहिँ उनीसँग ५९ लाख नगद छ । थप ३३ लाख अरुलाई ऋणमा लगाएका छन् । उनीसँग ८ तोला सुन र १२५ तोला चाँदी छ । हिजो पार्टीमा बुझाउने बेलामा सुनचाँदी छैन भनेका रायमाझीले अहिले भएको गरगहना पुख्र्यौली भएको र केही बुहारीको रहेको बताएका छन् ।
रायमाझीका दुई भाइ छोराहरु ४र४ लाख रुपैयाँका मोटरसाइकल चढ्छन् । पार्टीमा सम्पत्ति बुझाउने बेलामा छैन भनिए पनि अहिले यतिधेरै सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् रायमाझी ।
एमाओवादी स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको पनि सम्पत्ति विवरण रोचक छ । जनयुद्ध कालमा सापकोटाले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रममा भरेको फारममा यस्तो लेखिएको थियो( ‘०५८ सालदेखि घरजग्गा सबै पार्टीकरण र स्थानीय पार्टीले नै भोगचलन गर्दै आएको ।’
तर, ०५८ सालमै घरजग्गा सबै पार्टीकरण गरिसकेको बताउने सापकोटाले मन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा १८ कित्ताभन्दा बढी जग्गाजमीन देखाएका छन् । र, प्रायः सबै जग्गाजमीन पत्नीका नाममा रहेको विवरणमा देखाइएको छ । पार्टीलाई सम्पत्ति बुझाइसकेका सापकोटाले आफ्नो घर भूकम्पले भत्काएको र भूकम्पपीडित बनेको बताउने गरेका छन् ।
अर्को रोचक पक्ष के भने मन्त्री सापकोटाले विगतमा पार्टीलाई भरेको फारममा सुनचाँदी गरगहना ‘छैन’ भन्ने उल्लेख गरेका थिए । यसपालि मन्त्री भएर भरेको फारममा चाँहि उनले सुन २ तोला देखाएका छन् र त्यो ०३३ सालमा श्रीमतीले दाइजो पाएको उल्लेख गरेका छन् । ०३३ सालमै पत्नीले दाइजो पाएको सुन ०५८ सालमा सापकोटाले आफ्नै पार्टीलाई नदेखाई ‘छैन’ भनेर ढाँटेको खुलासा भएको छ ।
विगतमा सापकोटाले नगद छैन भन्ने उल्लेख गरेका थिए । अहिले मन्त्री बन्ने बेलामा उनको खातामा १ लाख रुपैयाँ छ, जुन सभासद हुँदाको तलब हो । सापकोटाले उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुरले जसरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिँदैन ।
एमाओवादी नेता एवं गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको सम्पति विवरण पनि उस्तै रोचक छ । जनयुद्धकालमा पार्टीलाई सम्पत्ति बुझाउने बेलामा बस्नेतले आफूसँग पाँच हजार रुपैयाँको सुनचाँदी रहेको विवरण उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्री भएपछि भरेको सम्पति विवरण फारममा बस्नेतले आफूसँग १ सय केजी ९एक क्विन्टल० चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन्, जसको मूल्य ५८ लाखभन्दा बढी हुन्छ । त्यस्तै सुन ५ तोला रहेको मन्त्री बस्नेतले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
पति, पत्नी र सन्तानको समेत गरी मन्त्री बस्नेतसँग १२ लाख भन्दा बढी मौज्दात छ ।
मन्त्री बस्नेतले जनयुद्धकालमा जग्गा छैन भने ढाँटेका थिएनन् । तर, अहिले कमाएको १२ लाख रकमचाँहि उनले तलबबाट भनेर उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतकी पत्नी पनि विगतमा सांसद र मन्त्री थिइन् । तर उनले कतिपय पत्रिकामा दिएको अन्तरवार्तामा पैसाको अभावले छोराछोरीले मम खान नपाएको बताउने गरेकी थिइन् ।
माओवादीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको सम्पत्ति विवरणमा भने विगत र अहिले खासै बेमेल देखिएको छैन । गजुरेलले पार्टीलाई विवरण बुझाउँदा भरेको फारममा आफूसित ५ तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका थिए । अहिले पनि उनले ५ तोलाकै विवरण दिएका छन् ।